About Us – Shaamila.com
Shaamila Technology waa shirkad soomaaliyeed oo gaar looleeyahay qabatana adeegyo laxiriira technologiyadda sida sameenta softwars iyo naqshadeenta websites, kireenta Domain iyo Hosting, soosaarista fiidiwoyada xayaysiinada ah (ad videos), naqshadeenta sumadaha ganacsi(Logo Design) iyo adeegyo lamid ah.
Shirkadda shaamila waxaa lagu aasaasay magaalada muqdisho taariikhdu marka ay ahayd 15/6/2018, waxaa aasaasay aqoonyahano isbiirsaday oo kufakaray baahida laxiriirta teknolojiyadda inee xaliyaan.
Shaamila Technology waxa ya kudadaaleeysa sidi ay uoqon leheed shirkad gaarto goob ganacsi kasta.
Shaamila Technology waxa ay tiigsaneeysa inee noqoto shirkadda oogu balaaran ee bixisa deegyada teknolojiyada lairiiro kuna bixiso qiimaha oogu jaban.
Shaamila Technology waxa ay utaagantahay in adeegyo teknoloji oo dhameestiran aay gaarsiiso dhamaan macaamiisha.
Waxaan utaaganahay in qiimo aad ujaban ay ganacsadata, goobaha waxbarashda isbitaalada iyo hey’adahuba ay kulaan adeegyo qubaro kasoo shaqeeyeen.
Shaamila Technology adeegyada ay qabato waxa ay kala yihiin
1- Software Development 2- Web Development
3- Web Design 4- Domain Registration
5- Web Hosting 6- Multimedia Desing
7- Logo Desing
Projects Life Circle
Aad baad umahadsantahay hadaa soogartay aqrinta qeybtaan
Shirkadda Shaamila qaab fulinta dhisidda softwareska ama websiteyada waxa ay umari doonta 5 talaabo oo aan isleenahay waana dagdagsiimo waana dheela tir shaqo.
hadi macamiilka o kuqanco adeegeena ee noqoto in aan usameeyno adeeg software dhisid ah ama website sameyn ah shirkadda ayado kaashaneesa macaamiisha waxa ee qaadi doontaa talaabooyinkas oosocda.
1- Baaritaan: shirkada wax ay baaritaan aad uqoto dheer kusameeyn doonta baadiha adeeg aa ubaahantahay iyo qaabka aad oogu baahntahay taasoo kadhan karto in Shirkadaa shaamila aay halkaas ka hesho mudada saxda ah oo ay kuugu sameyn doonto adeegaaga.
2- Dalbasho iyo Heshiis: shirkadda marke baaritaan kusameeyso wexe kusoo bandhigi doontaa mudada shaqada soconeeyso iyo qiimaha taaso kadhalaneysa in lakala saxiixdo heshiiska sameynta adeega aa dalbatay.
3- Sameynta shaqada: kadib saxiixa heshiiska, shirkada waxa ay toos uguda gal doontaa inee kusameyso adeega aaa dalbatay ayadoo lagayaabo indhoor jeer ee kuguso laabtaan si marki shaqada laguda galo hadee su’aalo dheeriya oo kusaabsan baahidada ay noosoobaaxaan aan kuula wadaagno.
4- Tijaabin: Shirkada inta aan lagaarin mudadi lagu heshiiyay in laguugu sameeynaayo wexee kuukeeni doonta adeega dalbatay oo hor dhac ah si aan anagoo wada jir ah uwada tijaabino.
5- Dayactirka ciladaha: Shirkadda marke adegaaga kugu wareejiso kaama hari donto ee waxa ay dayac tiri doontaa hadi waxba ciladaa soo baxaan tijaabinta kadib, ama baahi dheeri ah soo baxdo.
Wixi faafaahin dheeriya nagalasoo xirirr
Bakaaro Howlwadaag Mogadishu Somalia Phone:+252615210822 Email: admin@shaamila.com
Dalbo adeega aa jeceshahay inaa kuuqabano adoo click siinaayo batoonka hoose kadib buuxi foomka waxa kuugu so jawaabi doonaa sida oogu dhaqsiyaha badan
© 2018 Shaamila.com.
Developed by: Shaamila Team.